Qoorqoor maka baxay qaanaddii Farmaajo? | KEYDMEDIA ENGLISH
Qoorqoor maka baxay qaanaddii Farmaajo?
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Xil-garsiinta, Maxamed Xuseen Rooble, ayaa geed-fadhi u ahaa kulamadaan, wuxaana la filayaa in dhawaan uu dhaco kulan saddex geesood ah oo Rooble, Qoorqoor iyo Cabdiraxmaan u dhaxeeya.
MUQDISHO, Soomaaliya – Madaxweynaha Galmudug, Axmed Cabdi Kaariye [Qoorqoor] ayaa isku diyaarinaya, inuu si toos ah uga baxo qaanadda siyaasadeed ee uu ku jiray sanadihii la soo dhaafay, kadib markii lagu wada baraarugay in aysan jirin wax fursad ah oo ay ku soo laaban karaan Kooxda Farmaajo hoggaamiyo.
Xogo hoose, oo ilo muhiim ah la wadaageen Keydmedia Online, ayaa sheegaya in Qoorqoor, kulamo siyaasadeed oo maalmahaan uu la lahaa, ganacsatada, odayaasha iyo Siyaasiyiin ku heyb ah, uu si cad u sheegyay inuu diyaar u yahay, qayb ka noqoshada qorshaha beeshiisa Habargidir, sanadkaan ku raadinayaan kursiga Madaxweynaha.
Sida ay xoguhu muujinayaan, tan iyo Talaadadii hore, Qooqoor, wuxuu in ka badan saddex jeer la kulmay, hoggoomiyaha Xisbiga Wadajir, Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame, halka ay sidoo kale, is arkeen hoggaamiyaha Xisbiga Sahan, Cabdikariin Xuseen Guuleed, kuwaas oo ugu cadcad, siyaasiyiinta ka sharraxan beeshiisa.
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Xil-garsiinta, Maxamed Xuseen Rooble, ayaa geed-fadhi u ahaa kulamadaan, wuxaana la filayaa in dhawaan uu dhaco kulan saddex geesood ah oo Rooble, Qoorqoor iyo Cabdiraxmaan u dhaxeeya, kulankaas kadib, Qoorqoor, wuxuu toos ugu biiraya olalaha Warsame ama Guuleed midkood sida qorshuhu yahay.
Xildhibaanno uu hoggaaminayo, Xidhibaan Dhagey Geelle Ugaas, oo aad ugu dhow Qoorqoor iyo ganacsatada jilbo-weynta ah ee Mudug iyo Galgaduud, ayaa Qoorqoor, ka saaray qaanadda kooxda guuldarradeedu billaabatay, kadib markii lagu fashilmay in la xajiyo kursigii Guddoomiye ku xigeynka Aqalka sare.
Dadka qaar ayaa ku doodaya in Qoorqoor, aysan gacanta ugu jirin, xildhibaanno uu siyaasiyiin gaar ah kula shirkoobo, hayeeshee, sheekada ugu weyn ee xilligaan taalla miisaska lagu gorfeeyo siyaasadda ayaa ah, qorshaha socda iyo sida looga mira-dhalin karo, QQ-na qeyb ugu noqon karo, ololaha siyaasiyiin xigtadiisa ah.
Qoorqoor, waxaa lagu tilmaamaa shaqsi midibbo badan, oo aan sal-fadhiya iyo siyaasad deggan midna lahayn, waxuu ku suntan yahay, guur-guur iyo hadba geed fariisi, waxaana la is weydiin karaa, sida ay Musharrixiinta ku heybta ah u aamini karaan?, maadaama uu muddo ku daabnaa Farmaajo, qeybna ka ahaa mushkiladaha jira.
Dhawaan, kulan qarsoodi ah, oo dhex maray Qoorqoor iyo Fahad Yaasiin, oo u jeedkiisa lagu sheegay kala war qaadashadii ugu danbeysay, ayay xoguhu tilmaameen in Fahad uu Qoorqoor, ku wargaliyay inuu dhamaadka Isbuucaan go’aanka ugu danbeeya ka gari doono musharraxa uu dhisayo, taas ayaan sababtay in QQ ka diga rogto Farmaajo.
Fahad wuxuu Sabtigii u ambabaxay Qatar, halkaasoo laga jaan-gooyo hadba siyaasiga uu wax ku darsanayo, waxaana jira warar aysan Keydmedia Online, xaqiijin karin, oo sheegay in Maalmaha soo socda Fahad Yaasiin, si toos ah ugu biiri doono, shaqsiyaadka furaha u haya Ololaha Madaxweynihii hore Shariif Sheekh Axmed.
Farmaajo oo siyaasad ahaan geeriyooday, ayaa isku diyaarinaya inuu nolo siyaasadeed helo, la’aanta Fahad Yaasiin iyo afar ka mid ah Madaxda Maamullada, xilli ay xusad mudan tahay in Xildhibaannadii ka soo baxay Koofur galbeed, ay intooda badan kala jiiteen kutlooyin siyaasdaeed oo xubno is-baddel doon ah hoggaanka u hayaan.